ငါဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှမကြုံဖူးဘူးလား။ ၂ ။ ဘယ်တော့ပြန်လာမှာလဲ - Netflix မူရင်း
ငါဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှမကြုံဖူးဘူးလား။ ၂ ။
Is Never Have I Ever Season2Coming 2021
ငါဘယ်တော့မှ (L မှ R သို့) ဘယ်တော့မှ MAITREYI RAMAKRISHNAN ကို DEVI VISHWAKUMAR၊ RAMONA YOUNG အဖြစ် ELEANOR WONG နှင့် LEE RODRIGUEZ တို့က FABIOLA TORRES အဖြစ်မည်သည့်အခါမှမ Crave I EVER Cr ။ လာရာ SOLANKI / NETFLIX © 2020
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်နောက်ဆုံးနိုင်ငံတော်ရာသီ ၅ ရောက်နေသလား။ Cruella သရုပ်ဆောင် Emma Stone သည် Netflix သို့လာသလား။
Netflix အဖြစ်အပျက်ကိုအောက်ပါအတိုင်းဖော်ပြထားသည် -
စိတ်ထိခိုက်စရာကောင်းသောနှစ်ပြီးနောက်အိန္ဒိယ - အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်တစ် ဦး သည်သူမ၏လူမှုရေးအဆင့်အတန်းကိုမြှင့်တင်ရန်သာလိုသည်။ သို့သော်သူငယ်ချင်းများ၊ မိသားစုများနှင့်ခံစားချက်များကသူမကိုလွယ်လွယ်ကူကူမဖြစ်စေနိုင်ပါ။
ပထမမျိုးဆက်အိန္ဒိယအမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဘဝအကြောင်းကိုဤလာမည့်အသက်အရွယ်အရွယ်ဟာသစီးရီးသည်အမှန်တကယ်တွင် Mindy Kaling ၏တကယ့်ဘဝကလေးဘဝကမှုတ်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်၊
ရာသီ2လွှတ်ပေးရန်နေ့စွဲသည်ဒီမှာငါတို့ယခုအထိသိသောအရာကိုပါပဲ။
ငါဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှငါဘယ်တော့မှမရရာသီ2ထွက်လာမလဲ?
ကံမကောင်းစွာပဲအဘို့အဘယ်သူမျှမဖြန့်ချိသည့်ရက်စွဲနေဆဲရှိပါတယ် ငါဘယ်တော့မှမရှိဘူး ရာသီ2ရုံသေး။ ကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း Netflix သည် Kaling နှင့် Fisher တို့၏စီးရီးများကို ၂၀၂၀ နွေရာသီတွင်ဒုတိယရာသီအဖြစ်ပြန်လည်သက်တမ်းတိုးခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှုသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်စတင်သည်၊ သို့သော်ယခုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးကောင်းစွာသိရှိထားသည့်အတိုင်းနောက်ကျသောရိုက်ကူးခြင်းအတွက်ရွက်လွှင့်ခြင်းကိုချောမွေ့စွာမလုပ်ဆောင်နိုင်သေးပါ။ အများစုမှာ COVID-19 ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့သော်ထိုအချိန်ကာလကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ဒုတိယရာသီသည် ၂၀၂၁ နွေ ဦး ရာသီတွင်ဖြစ်စေ၊ နွေရာသီတစ်ချိန်ချိန်တွင်ဖြစ်စေဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ညှိနေပါ။ ကြည့်ရတာ ငါဘယ်တော့မှမရှိဘူး ဟောကိန်းထုတ်အဖြစ်ဖွယ်ရှိ, ဒီနှစ်ပြန်လာကြလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့ကအရမ်းလိုအပ်နေကြောင်းအတည်ပြုချက်ကိုစောင့်ဆိုင်းနေပါတယ်။
နောက်တစ်ခု:Stranger Things4ရာသီဘယ်တော့ထွက်လာမလဲ။
Netflix Life၊ Streaming Tv Podcast တစ်ခု
ဖော်မြူလာ ၁ - Survive သို့ရာသီဥတုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသို့ပြန်လည်မောင်းနှင်ခြင်း - F1 ပရိတ်သတ်များအတွက်သတိထားရမည်
အောက်တိုဘာလ 2018 ခုနှစ်တွင် Netflix မှထွက်ခွာ: Freaks & Geeks, White ကော်လာ, လူငယ်တစ် ဦး အကြောင်း, 90210 နှင့်ပိုပြီး
အရှက်မရှိသောရာသီ ၉ သွန်းသည် Courteney Cox နှင့် Katey Sagal တို့ကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ထားသည်
လော့ခ်နှင့်ကီး - Genevieve Kang သည်ရာသီ ၂ တွင်ဖြစ်ပျက်မည့်အရာများကိုလှောင်ပြောင်သည်
လူစီဖာရာသီ 4၊ အပိုင်း ၄ သည်Edဒင်၏ပထမဆုံးအမျိုးသမီး Eve ၀ ကိုထုတ်ဖေါ်လိမ့်မည်
ခရစ်စမတ် 2019: နေအိမ်တစ်နေရာတည်းကိုအဘယ်မှာလွှင့်ရမည် 2
ယခုတနင်္ဂနွေတွင် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးထိတ်လန့်ဖွယ်ကောင်းသောရုပ်ရှင် ၅ ခု - No Escape Room နှင့်အခြားအရာများ
5 သူစိမ်းအရာများတွင်ယခုအချိန်အထိ5အကောင်းဆုံး Will အချိန်လေး
Red သတိပေးချက်နေ့စွဲ၊ သွန်း၊ အနှစ်ချုပ်၊ နောက်တွဲယာဉ်နှင့်အခြားအရာများ
ခုနစ်စက္ကန့်အပိုင်း (၃) တွင်ပြန်လည်အသက်သွင်းခြင်း - ဘဝနှင့်သေခြင်းကိစ္စများ
Creed ထုတ်ပြန်သည့်နေ့။ ။ Creed သည်မည်သည့်အချိန်တွင် Netflix တွင်ရှိလိမ့်မည်နည်း။
The Ranch Season 1 Part2ကိုဘယ်တော့လွှတ်မလဲ။
ရုံးရာသီ4ခရစ်စမတ်ဇာတ်လမ်းတွဲ
လာသောအခါအလိုတော် imposters ရာသီ2က start
kimmy Schmidt ရာသီ2သွန်း
အရာအားလုံးယူတာပဲ! ရာသီ 2
Hulu အပေါ်ပိုကောင်းခေါ်ဆိုခရှောလုသည်ရာသီ 2
Fox ရဲ့ The ပါရမီရှင်: Blink ပစ်ခတ်မှုအသက်ရှင်ကျန်ရစ်မဆိုအခွင့်အလမ်းရှိပါသလား
ဒါဟာ Netflix အပေါ်ယခု Philadelphia တွင်ရာသီ 10 မှာအမြဲတမ်းနေသာပါပဲ
ယခုအချိန်တွင် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးထိတ်လန့်ဖွယ်ရုပ်ရှင်များ (၂၀၂၀)
ချစ်ခင်ရပါသောလူဖြူများရာသီ4ဖြန့်ချိသည့်ရက်၊
ရက်သတ္တပတ်၏ Netflix တီဗီ Pick: တိုက်ခန်း 23 အတွက် B- မယုံကြည်ပါနဲ့